तपाईंलाई थाहा छ ? भगवान बिष्णु नागको ओछ्यानमै किन सुत्नुहुन्छ ? जान्नुहोस – mero sathi tv
तपाईंलाई थाहा छ ? भगवान बिष्णु नागको ओछ्यानमै किन सुत्नुहुन्छ ? जान्नुहोस
On १५ कार्तिक २०७४, बुधबार ०५:००
चाहे कुनै चित्रमा हेरौ, टेलिभिजनमा हेरौ भगवान विष्णु विभिन्न अवतारमा देखिन्छन । कुनैमा उनी गरुडमा सवारी भएको देखिन्छ, कुनैमा शंख, चक्र, गदा, पद्मा साथ देखिन्छ । कति चित्रमा चाहि उनी सर्पको ओछ्यानमा आरमले सुतेको देखिन्छ ।
घरमा आएका यी ४ ब्यक्तीलाई कहिले खाली हात पठाउनु हुँदैन
हातको रेखा हेरेर आँफै थाहा पाउनुहोस प्रेम सम्बन्ध र विवाहको कुरा